Kenya oo sheegtay in ay xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKenya oo sheegtay in ay xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya
June 11, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Kenya oo sheegtay in ay xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya. [Sawir Hore]
Nairobi-(Puntland Mirror) Kenya ayaa sheegtay in ay xirtay xadka ay la leedahay Soomaaliya, sida uu tabiyay wargeyska Daily Nation maanta oo Talaado ah.
Masuuliyiinta Kenya ayaa sheegay in go’aanka la gaaray si loo adkeeyo ammaanka.
Marka loo eego taarikhda xadka Kenya iyo Soomaaliya, tilaabadan maahan wax cusub, balse tani ayaa imaanaysa iyada oo ay jirto kacsanaan diblomaasiyadeed oo u dhaxeysa labada dal taasoo ay keentay muranka xadka badda, kaasoo ay go’aaminayso maxkamada ICJ.
Muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa hadda gacanta ku haysa maxkamada ICJ, waxaana la filayaa in dabayaaqada sanadkan 2019 ay soo bixi doonaan natiijooyin dhor dhac ah.
March 4, 2020 Kenya oo wadahadalo ka bilaabi doonta sidii ay ciidankeeda ugala bixi lahayd Soomaaliya